FANOMANANA NY JMJ MADA IX : Nidina tany Mahajanga ny Praiminisitra Ntsay Christian
Tombony ny hanatanterahana ny JMJ na Journées Mondiales de la jeunesse eto Mahajanga. 2 octobre 2018
Maro ireo fotodrafitrasa efa nisy no nohatsaraina handraisana ireo tanora, ary maro ihany koa ireo fotodrafitrasa no nohatsaraina. Tanora miisa 30 000 eo no andrasana amin’ny faran’ny herinandro io, hanao fivahiniana masina eto Mahajanga. Miaraka amin’ireo ray aman-dreny sy mpanabe dia mety tafakatra hatrany amin’ny 50 000 isa ny vahiny.
Tonga teto Mahajanga ny praiminisitra Ntsay Christian ny faran’ny herinandro teo nijery ny fandrosoan’ny asa rehetra. Niara-nivory tamin’ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny tao amin’ny hotely Baobab tree izy ny marainan’ny sabotsy ary nijery ifotony ihany koa ireo fotodrafitrasa vita. Anisany nahazo tsiny ny Jirama satria mbola maro ireo asa tsy vita. Toy izany koa ny lisea teknika izay mbola tsy nokasihina mihitsy. Ho fandraisana ireo tanora katolika ireo dia namboarina ny sekoly maro. Nohatsaraina ny trano fidiovana sy fivoahana ho an’izay manana ary ny tsy manana nananganana vaovao. Miisa 13 ireo toerana nohajariana handraisana ny tanora.
Efa mipetrapetraka ny fanomanana
Ankoatra izany dia nodiovina manokana koa ny toerana misy ireo tanora voafonja satria anisany tafiditra ao anatin’ny fandaharam-potoanan’ireo mpivahiny ireo ny hitsidika ireo voafonja. Eny amin’ ireo toerana ireo no handraisan’ireo tanora ny katesizy sy ifanakalozany hevitra miaraka amin’ny Eveka satria hisy eveka tsirairay amin’ireo toerana ireo, izay hitarika ny fampianarana araka ny mahazatra rehefa fotoanan’ny JMJ. Paroasy sy sekoly no toerana nosafidiana hanatanterahana izany fandalinam-pinoana izany dia ny ao Tsaramandroso, Saint Gabriel, Notre dame, sainte Jeanne d’Arc, oniversité, katedraly, école normale, Belobaka, Amborovy, Tsararano, Antanimasaja, Antanimalandy, Mahabibo. Maro koa ny lalana namboarina eto Mahajanga ka anisan’izany ireo lalana miditra ny tanàna : lalam-pirenena fahaefatra iny sy ny lalana mankany Amborovy, ary ny lalana manoloana ny katedraly.
Misy ihany koa ny lalan-tany nohatsaraina satria handehanan’ireo tanora hamakivaky ny tanàna avy ao Tsararano hatreny Belobaka. Ankoatra izay dia maro ihany koa ny lavadrano namboarina. Ny andrin-jiro nasiana jiro, ny toerana tsy nisy jiro hatrizay, nahazo jiro. Mijanona ho an’i Mahajanga ireo fotodrafitrasa ireo rehefa vita ny fivahiniana masina izay tsy hifarana raha tsy ny 14 oktobra izao.
Mpizahatany voatafika, vazaha vavy iray voatifitra, lasan’ny jiolahy ny vola 600 euros TSINGIN’I BEMARAHA (260) 20 mai 2019 Tamin’ny alalan’ny « Gps » no nahatrarana ireo jiolahy HALATRA MOTO TENY SOAVIMASOANDRO (202) 22 mai 2019 Nitsoaka ny fonja ilay tovolahy nitifitra azy TOVOVAVY IRAY MATY NISY NAMONO TANY TOLIARA (183) 22 mai 2019 Ravan’ny polisin’ny Fip ny tambajotran’ny mpamaky trano ny alahady 19 mey lasa teo TOAMASINA (167) 20 mai 2019 Mampihena ny tahan’ny olona mamonjy toeram-pitsaboana TSAHO MIELY MOMBA NY HOPITALIM-PANJAKANA (161) 20 mai 2019 Vehivavy iray tratran’ny fokonolona nangalatra sy namaky trano AMBALABE TOAMASINA (160) 23 mai 2019